IROSARI KWINTLIZIYO ENGCWELE KAYESU WASENAZARETHA
Kule nqaku siza kukufundisa ukuba ungathandaza njani kwi irosari kwiNgcwele yeentliziyo zikaYesu, ukuze ufumane umvuzo wokukhulula kwaye ukhulule umphefumlo wakho kwilangatye lendawo yentlambululo-miphefumlo. Ungaphoswa ziingcaciso esiza kukunika zona.
1 IRosari kwiintliziyo ezingcwele zikaYesu
2 Yenza umthandazo werosari
3 Iincwadi zentliziyo eNgcwele kaYesu
IRosari kwiintliziyo ezingcwele zikaYesu
Ukwenza umthandazo weNkosi irosari kwiNgcwele yeentliziyo zikaYesu, Kuya kufuneka ulandele amanyathelo ezimbalwa ezilula, esiza kuchaza ngazo kweli nqaku. Kananjalo kubalulekile ukuba wazi le mithandazo ingezantsi ukuze wenze umthandazo ngendlela echanekileyo.
Ngokomgaqo, kwiirosari ezininzi kunye novenas isenzo sophuliso kufuneka senziwe ngaphambi kokuqala: guquka kuzo zonke izono zakho kwaye ucele uxolelo ngokukona uThixo uYise.
Nangona kunjalo, kule rosari isenzo sophuliso asiyi kwenziwa, kodwa kunoko, lo mthandazo ulandelayo (Ánima Christi), ohambelana no-Saint Ignatius:
"Umphefumlo kaKristu, undingcwalise."
"Umzimba kaKristu, ndisindise."
"Intliziyo kaKristu, ndinike ubomi."
"Igazi likaKristu, ndinxilise."
"Amanzi asecaleni likaKristu, ndihlambe."
"Umnqweno kaKristu, undithuthuzele."
“Owu Yesu olungileyo! Ndive ".
"Ngaphakathi kwamanxeba akho, ndifihle."
"Ungavumi ukuba ndimke kuwe."
"Kutshaba olubi, ndikhusele."
"Ngexesha lokufa kwam, ndibize".
"Kwaye thumela kum
"Ukuze, kunye noJoseph oNgcwele, iNtombikazi enguMariya, iiNgelosi zakho kunye nabaNgcwele bakho, ndikudumise kwaye ndikusikelele ngonaphakade kanaphakade."
Le rosari yenziwe ngamashumi amahlanu, ekubhekiswa kuwo kukufika kwabahlanu Nkosi Yesu Kristu. Ngokukwanjalo, uyakubanika uxolelo abo bathandaza le rosari.
Ngokwesiqhelo le rosari isetyenziselwa ukucela uxolelo kuKrestu nenceba kuzo zonke izono ezenziweyo, nazo zonke iziphoso ezenziwe kuye. Ngale ndlela, ayicacanga into yokuba umntu athandaze kwiqela okanye yedwa, kuba isiphelo sinye, kwaye ubabalo lufunyenwe nalo: inceba nosindiso.
Yenza umthandazo werosari
Ekuqaleni komthandazo ka irosari kwiNgcwele yeentliziyo zikaYesu Okokuqala, uqala ngo-imanima Christi, kwaye uqala ukuthandaza kwishumi ngalinye leminyaka nakwimeko okuyo ngale ndlela ilandelayo:
Xa kuqala ishumi: "Yesu, mnandi kwaye uthobekile ngentliziyo, yenze yam ilingane neyakho."
Phinda Intliziyo Engcwele kaYesu amaxesha ali-10: «Intliziyo Engcwele kaYesu, ndiyathemba kuwe». Oku kuthabathela indawo iSichotho sikaMariya.
Xa ukwiakhawunti ezinkulu: «Intliziyo engenasono kaMariya, ube lusindiso lomphefumlo wam». Ngale ndlela uMthandazo weNkosi ufakwa endaweni yawo.
Xa ugqibile ishumi lesihlanu: «Intliziyo emnandi kaYesu, yiba luthando lwam kwaye ube nenceba kuthi. Intliziyo entle kaMariya, sithandazele. »
Ukubona indlela umthandazo we irosari kwiNgcwele yeentliziyo zikaYesu, ukusuka ekuqaleni kwayo kude kube sekupheleni kwayo, kubalwa kwimithandazo esiyichazayo apha, kuya kuba yimfuneko ukubona le vidiyo ilandelayo:
Iincwadi zentliziyo eNgcwele kaYesu
"Nkosi, yiba nenceba kuthi."
"Kristu, yiba nenceba kuthi."
"Nkosi, yiba nenceba kuthi"
"Yesu Krestu uyasiva."
“Yesu Kristu, simamele. (Ukusuka apha impendulo ithi: yiba nenceba kuthi) "
"UThixo waseZulwini uYise."
"UThixo uNyana uMhlawuleli wehlabathi."
"UThixo uMoya oyiNgcwele."
"Uziqu-zintathu Ongcwele, wena unguThixo omnye"
"Intliziyo kaYesu, Nyana kaBawo ongunaPhakade."
"Intliziyo kaYesu, eyakhiwe esibelekweni seNtombikazi kaMama ngoMoya oyiNgcwele"
"Intliziyo kaYesu, eLizwini likaThixo ngokumanyene kakhulu."
"Intliziyo kaYesu, yobungangamsha obungenasiphelo."
"Intliziyo kaYesu, iTempile eNgcwele kaThixo."
"Intliziyo kaYesu, Umnquba wOsenyangweni".
"Intliziyo kaYesu, Indlu kaThixo kunye nomnyango wezulu."
"Intliziyo kaYesu, isithando somlilo esivuthayo."
"Intliziyo kaYesu, ingcwele yobulungisa nothando."
"Intliziyo kaYesu, egcwele ukulunga nothando."
"Intliziyo kaYesu, Inzonzobila yazo zonke izidima."
"Intliziyo kaYesu, elifanele lonke udumo."
"Intliziyo kaYesu, Kumkani kunye neziko leentliziyo zonke."
"Intliziyo kaYesu, ekufihlwe kuyo bonke ubuncwane bobulumko" kunye nesayensi.
"Intliziyo kaYesu, ekuhleli kuyo yonke inzaliseko yobuThixo."
"Intliziyo kaYesu, awayevuya ngayo uYise."
"Intliziyo kaYesu, esizalisekileyo sonke sifumene kuye."
"Intliziyo kaYesu, nqwenela iinduli ezingunaphakade."
"Intliziyo kaYesu, unomonde kwaye unenceba."
"Intliziyo kaYesu, inkululeko nabo bonke abakucelayo."
"Intliziyo kaYesu, umthombo wobomi nobungcwele."
"Intliziyo kaYesu, isicamagushelo sezono zethu."
"Intliziyo kaYesu, egcwele izithuko."
"Intliziyo kaYesu, eqwengwe ngenxa yezono zethu."
"Intliziyo kaYesu, yenziwa intobelo kude ukufa".
"Intliziyo kaYesu, ngomkhonto ohlabileyo."
"Intliziyo kaYesu, umthombo wentuthuzelo yonke."
"Intliziyo kaYesu, ubomi bethu kunye nokuvuka kwethu."
"Intliziyo kaYesu, uxolo noxolelaniso."
"Intliziyo kaYesu, ixhoba lezono zethu."
"Intliziyo kaYesu, usindiso lwabo bathembela kuwe."
"Intliziyo kaYesu, ithemba labo bafa kuwe."
"Intliziyo kaYesu, bonwabele bonke abaNgcwele."
IMvana kaThixo, esusa izono zehlabathi: sixolele, Nkosi.
“Mvana kaThixo, esusa izono zehlabathi: yiva, Nkosi.
"Imvana kaThixo, osusa izono zehlabathi: yiba nenceba kuthi."
"Yesu, ululamile kwaye uthobekile ngentliziyo, yenza iintliziyo zethu zifane nezakho."
Ukuba uyifumene le posi inomdla, siyakumema ukuba ufunde inqaku lethu ku: Indlela yokuthandaza kwiwaka lamaYesu?.